I-LinkedIn: Iyintoni kwaye isebenza njani ukukunceda ufumane umsebenzi | Iindaba zeGajethi
Ngokuqinisekileyo uninzi lwenu ukhe weva nge-LinkedIn. Nangona uninzi lusenokungazi ukuba luyintoni okanye luluncedo kangakanani. Emva koko siza kuthetha ngakumbi ngayo. Ke unokwazi ukuba yintoni, yeyantoni, kwaye okona kubaluleke kakhulu, ukuba isebenza njani. Ke, unokufumanisa ukuba yinto onomdla kuyo kwaye uyisebenzise.
Ngesinye isihlandlo esidlulileyo besele sithethile nge-LinkedIn kwiwebhu, kodwa emva koko siza kuthetha ngobunzulu obukhulu ukuze ube sele ufumana umbono wento eyiyo okanye yeyantoni. Kodwa konke oku, ukongeza kwindlela esebenza ngayo, siza kukuxelela apha ngezantsi.
1 Yintoni i-LinkedIn kwaye yenzelwe ntoni?
2 I-LinkedIn isebenza njani
2.1 Iprofayile ye-LinkedIn
2.2 Abafowunelwa abaxhumeneyo
Yintoni i-LinkedIn kwaye yenzelwe ntoni?
I-LinkedIn yile Inethiwekhi yokuncokola eyasekwa ngoDisemba 2002 kwaye yaphehlelelwa ngokusesikweni ngoMeyi ka-2003. Abayili bayo nguReid Hoffman, uKonstantin Guericke, uEric Ly, uAllen Blue noJean-Luc Vaillant. Nangona kunjalo, ayisiyo-intanethi yenethiwekhi, njengoko sisazi kwezinye iimeko.
Ukusukela ngeli xesha Sithetha inethiwekhi yoluntu efanelekileyo. Ijolise kwishishini kunye nobudlelwane bobuchwephesha, endaweni yobuqu. Enkosi kuyo, kunokwenzeka ukuba ufumane iinkampani okanye iingcali ezijonge ukwenza ishishini, zenze zaziwe okanye zinxibelelane. Ukongeza, unamathuba okukhangela umsebenzi okanye uwunike, ngale webhusayithi. Kodwa, kuyacaca ukuba i-LinkedIn ijolise kubaphulaphuli abaqeqeshiweyo.
Le webhusayithi, esikwanayo ngohlobo lweapp yeeselfowuni, ikhule ngokukhawuleza kwihlabathi liphela. Okwangoku inani labasebenzisi isondele kwizigidi ezingama-500 kwihlabathi liphela, ngaphezulu kwamazwe angama-200 kwimeko yenethiwekhi. Inobukho obukhulu eSpain, nezigidi zabasebenzisi kwilizwe lethu.
Ke ngoko, ukuba ufuna ukuzenza waziwe ngabantu kunye neenkampani ezikwicandelo lakho, ukukhuthaza ishishini lakho, okanye ujonge umsebenzi, le nethiwekhi yoluntu lolona khetho. Iya kukuvumela unxibelelane neengcali Lonke ihlabathi. Into enokuba lithuba elihle kwishishini lakho okanye kuwe ngokukodwa.
Okokuqala kufuneka singene kwiwebhusayithi ye-LinkedIn, siza kuyenza phi iakhawunti?. Ungayenza kweli qhagamshelo. Ukwenza iakhawunti sifaka i-imeyile, igama lokuqala kunye negama lokugqibela kunye negama lokugqitha. Nje ukuba singene kule akhawunti, into yokuqala esiza kucelwa ukuba siyenze kukumisela iprofayile yethu kuthungelwano lwentlalo.
Iprofayile yethu kule nethiwekhi yoluntu ifana nohlobo lweCV okanye ileta yokuhamba ngokubhekisele kwiingcali nakwiinkampani eziza kuyityelela. Ngesi sizathu, kufuneka sazise amava ethu omsebenzi kuyo, sikhankanye iinkampani esisebenze kuzo, ixesha esisebenze ngalo, isikhundla kunye nemisebenzi esiyenzileyo kweso sikhundla. Ukuchaza ezi nkcukacha ngokweenkcukacha kunika umfanekiso ongcono.
Kufuneka nathi yazisa ngezifundo ukuba sigqibile ebomini bethu. Ke ngoko, ukuba usigqibile isidanga, okanye wenze isidanga senkosi, kufuneka kukhankanywe. Chaza isihloko, indawo yokufunda, amabanga emfundo (ukhetho), ixesha lokufunda, njl. Iilwimi esizithethayo nenqanaba lazo ziyacelwa. Ukwenza oku, kwicandelo lolwimi, ulwimi lufakiwe kwaye unethuba lokukhetha phakathi kwamanqanaba ahlukeneyo.
Ukongeza koku, singazisa ezinye iikhosi okanye uqeqesho olongezelelweyo esithe sayifumana. Yonke into isebenza ukubonisa ukuba sinalo olu lwazi okanye ukuba sizilungiselele. Ukuba ubhale incwadi, ithisisi, okanye wenza iprojekthi okanye uphando, ungazifaka, kukho icandelo layo kwiprofayili.
Enye into enomdla kakhulu kwiprofayile yakho ye-LinkedIn yile uvunyelwe ukuba ufake inani lezakhono ocinga ukuba unayo kwaye ulungile kuyo. Ukongeza, abanye abantu abasebenze okanye abafundileyo kunye nawe, banokuqinisekisa ezi zakhono. Into eza kunceda abanye abantu, ngakumbi ukuba bafuna ukukuqesha, ukubona ukuba uyahlangabezana na neprofayili abayifunayo.
Okokugqibela, ngokubhekisele kwiprofayili kwi-LinkedIn, kubalulekile ukugcina ulwazi luhlaziywa. Ke ngoko, ukuba utshintsha imisebenzi, shiya lo unayo ngoku okanye ugcwalise naluphi na uqeqesho olongezelelweyo, kuya kufuneka uhlaziye olu lwazi. Banokuba nomdla kwabo batyelela iprofayile yakho, ngakumbi xa befuna umsebenzi.
Omnye wemisebenzi ephambili yale nethiwekhi yoluntu kuku Ukudibana kunye nokunxibelelana neengcali ezivela kwihlabathi liphela. Xa usenza iakhawunti kwaye uqwalasela iprofayile kuyo, abafowunelwa bahlala becetyiswa kuwe. Ngabo ubaziyo, okanye abasebenza kwinkampani yakho okanye abafunde kwiziko elinye nawe. Ngokwesiqhelo, uyabongeza aba bantu ubazi kuqala.
Kwaye kwi-LinkedIn unokuhlala ukhangela iiprofayili, usebenzisa i-injini yokukhangela phezulu. Ngale ndlela, uya kuba nakho ukongeza abantu ocinga ukuba banokuba luncedo ekuziphakamiseni okanye kwishishini lakho, okanye ukuba ufuna umsebenzi. Kukho iiprofayili ezisesidlangalaleni, apho ungabona khona yonke idatha kunye nezinye ezabucala. Ukongeza, kukho abasebenzisi abanomda ungathumela isicelo soqhakamshelwano. Ke uya kudibana nabantu ongenakuthumela kubo esi sicelo. Kodwa ungathumela umyalezo wabucala.
Ukuba nenethiwekhi ebanzi yabafowunelwa kwi-LinkedIn kunokuba luncedo kakhulu. Kuxhomekeke kusetyenziso oluya kulinika olu nxibelelwano lwentlalo. Kodwa le yinto ekufuneka uyicacisile, njengoko inokuba nefuthe nakwabantu oza kuqhagamshelana nabo. Nawe uza kufumana izicelo ezivela kubantu abafuna ukuba yinxalenye yenethiwekhi yakho. Kuya kufuneka uthathe isigqibo sokuba uyayamkela okanye awuyamkeli, ngeekhrayitheriya ezifanayo ozongezayo kwabanye abantu.
Sifumana inani elikhulu lamaqela afumanekayo kwi-LinkedIn. Kukho amaqela azo zonke iintlobo, ukusuka kubasebenzi kwinkampani, ukuya kubafundi bekhondo lomsebenzi okanye eyunivesithi okanye abantu abathetha ngesihloko esithile. Kunganomdla ukuba kwenye yazo. Ayisiyo kuphela yokuthatha inxaxheba kwiingxoxo okanye kwiindaba ngazo, kodwa nokuba nakho ukunxibelelana nabanye abantu. Kwakhona ukuba ube usesikhathini kunye nento eyenzekayo kweso sihloko okanye umsebenzi.
Unokukhangela amaqela usebenzisa i-injini yokukhangela phezulu kwiwebhu. Nje ukuba ugcwalise iprofayile yakho, unokufumana izindululo kumaqela. Njengokuba, ungandwendwela iiprofayili zabo bantu kwinethiwekhi yakho kwaye ubone ukuba ngawaphi amaqela akuyo. Ukusukela ukuba banomdla ofanayo, kunokwenzeka ukuba likho iqela elinomdla kuwe.
Eyona nto ixhaphakileyo yile Amaqela akwi-LinkedIn ahlulwe aba mabini: eluntwini nakwabucala. Ke ngoko, kwixesha langaphambili nabani na angazibandakanya nabo. Ngelixa kuhlobo lwesibini, kuya kufuneka ucele ukungena kulo kwaye iya kuba ngumlawuli weqela othatha isigqibo sokukunika ukufikelela kulo.
Enye yezinto ezilungileyo zonxibelelwano lwentlalo kukukhangela umsebenzi, enokhuphiswano olutsha eSpain. Ngokuhamba kwexesha, kwenziwe utshintsho kule nkalo kwiwebhu, kodwa ngoku, xa singena kwi-LinkedIn, phezulu sifumana icandelo lemisebenzi. Ngokucofa kuyo, sifumana imisebenzi enokubangela umdla kuthi.
Umsebenzi obonisiweyo wahlukile kumsebenzisi ngamnye. Yayo, Ulwazi lwakho lweprofayile lusetyenzisiwe, ezinje ngezifundo zakho okanye amava omsebenzi, ukuze ukwazi ukubonisa imisebenzi enokuthi ihambelane nento oyifunayo. Ngokwesiqhelo, imisebenzi iboniswa kwindawo yakho. Nangona ufuna, ungasebenzisa injini yokukhangela kweli candelo kwaye ukhangele imisebenzi naphina emhlabeni.
Unokucofa ekunikezelweni komsebenzi, apho unokufumana lonke ulwazi malunga nenkampani kunye nendawo ethile. Kwakhona, i-LinkedIn ihlala ibonisa zingaphi izakhono zakho ezifanelekileyo kulo msebenzi, ukuze ufumane umbono malunga namathuba onawo, okanye ukungqinelana okunokwenzeka naloo msebenzi.
Xa ucela, ungayenza ngokuthe ngqo kwisithembiso. Kuhlala kukho iqhosha lesicelo, elikhulu. Ngokwenza oku, iprofayile yakho ye-LinkedIn iya kuboniswa kwinkampani, apho inayo yonke idatha yamava akho kunye nezifundo ezikhoyo. Ngamanye amaxesha, kunokubakho iinkampani ezifuna uxwebhu olongezelelweyo olufana neeleta zengcebiso okanye ileta echaza ukuba kutheni ulungele isikhundla.
Inkonzo esele sikuxelele ngayo, kwaye onokufikelela kuyo kwiwebhusayithi yenethiwekhi yoluntu. Kuya kufuneka ucofe kwi i-icon yezikwere ezisithoba Elikwinxalenye ephezulu yesikrini, phantsi kwayo isicatshulwa esithi iimveliso ziyavela. Xa ucinezela, kuvela iindlela ezimbalwa, phakathi kwazo sifumana ukuFunda.
Yiwebhusayithi apho sinokufikelela kwizifundo ezikwi-Intanethi, kwiimeko ezininzi simahla. Ngale ndlela, uya kuba nakho ukulugqiba okanye uluphucule uqeqesho lwakho ngezifundo ezivela kumacandelo ahlukeneyo, anokuba luncedo kwikhondo lakho lobungcali. Inani lezifundo lonyuke kakhulu. Ngokuqinisekileyo kukho ezinye onomdla kuzo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Tutorials » I-LinkedIn isebenza njani